खाडी मुलुकमा श्रम गरिरहेका श्रीमानको मोबाइलमा आफ्नै श्रीमतीको परपुरुषसंगको न’ग्न तस्विर आएपछि ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
December 21, 2020 December 21, 2020 AdminLeaveaComment on खाडी मुलुकमा श्रम गरिरहेका श्रीमानको मोबाइलमा आफ्नै श्रीमतीको परपुरुषसंगको न’ग्न तस्विर आएपछि ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
परिवार पाल्न मजबुरीले धेरै युवाहरु बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा देश बाहिर छन । आफ्नै परिवारकै लागि पसिना बगाई रहेका कति युवाहरुको भाग्य भने सोचे जस्तो हुन्न । त्यस्तै अभागी मध्यका एक हुन् धर्मराज शाही ।
सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ५ को रुकुमकोटमा एउटा यस्तो घ’टना घटेको छ जुन घ’टना सुन्ने सबै अचम्ममा परेका छन् । यस्ता घ’टनाहरु प्राय फिल्मी पर्दाहरुमा देख्ने गरेका छौं । तर रुकुमकोटमा फिल्मी पर्दामा देखिने घ’टना वास्तविकतामा नै घटेको छ । जुन कुरा पत्याउन जो केहीलाई पनि त्यत्ति सहज भने हुँदैन । खासमा घ’टना के थियो भने एक दिन मोबाईल खेलाएरै बसिरहेका धर्मराज शाहीको मोबाईलमा एउटा नचिनेको नम्बरबाट फोटो आउँछ ।
दुर्भाग्य त्यो फोटो उनकै श्रीमती सुशीला शाहीको अ’र्ध’न’ग्न फोटो हुन्छ । जुन फोटोमा सुशिलाको पछाडि पट्टीको भाग पठाईएको हुन्छ । जुन भागमा सुशिलाले ट्याटु खोपेकि छन् । धर्मराजले आफ्नी श्रीमतीको ढाड हो भनेर चिनि हाल्छन् । किनकी उनकी श्रीमतीले ढाडमा ट्याटु खोपेपछि श्रीमानलाई पनि फोटो पठाएकी थिईन् । त्यही फोटोलाई धर्मराजले दोहोर्याई दोहोर्याई नियालेर हेरेपछि आफ्नै श्रीमती हो भन्ने थाहा पाउँछन् । यो कुरा थाहा पाएका धर्मराज निकै नै दुः’खी र उदास हुन्छन् ।
विदेशको भूमिमा धर्मराजले खुन पसिना बगाएको झण्डै ११ वर्ष हुन लागेको रहेछ । श्रीमानले उता दुः’ख गर्ने यता श्रीमतीले श्रीमानको कमाईमा एसआराम गर्नुका साथै अर्कैसंग माया पिरती गाँस्ने । अर्कैसंग माया पिरती गाँसेकी धर्मराजकी श्रीमती सुशिलाले धर्मराजले दुःख गरेर कमाएको ६० लाख रुपैया बोकेर परपुरुषसंग भा’गिदिईन् । पि’डित धर्मराजले आफ्ना दुःखका कुरा यसरी सुनाउँछन् ।
भिडियो हेर्न यहाँ जानुहोसः